Ngaba wake wazibuza ukuba kutheni amaTaliyane adla i-macaroni? Sonke siyazi ukuba abantu baseYurophu bajonga impilo yabo kwaye abayi kudla iimveliso eziyingozi. Ngoko ke, singakwazi ukuthetha ngokukhuselekileyo ukuba umgangatho "ochanekileyo" wepasta mveliso uncedo kakhulu.
Igama eliyiyo le-macaroni pasta ekuguquleleni ukusuka kwisiNtaliyane lithetha "inhlama". I-recipe yeklasi yokuveliswa kwezoshishino ilula. Ukususela kumgubo wengqolowa ngamanzi, uxoke inhlama, uze udlule umshishini okhethekileyo onika umlo, usika kwaye umile. Igama elithi Maccheroni likhoyo kwisikreksi samaTaliyane. Ngokuqhelekileyo bambiza le bhubhe ende ende yomquba omile kunye nomngxuma ngaphakathi.
Ngokuxhomekeke kumgangatho kunye nomgangatho womgubo, i-pasta ihlukaniswe ngamaqela nakwiiklasi. Iqela A liquka iimveliso ezivela kumgubo weengqolowa ezinqinileyo. I-Macaroni yeqela A ayilingi kakhulu kwaye ibinempahla eninzi, esiza kuxubusha ngezantsi. Iqela B - macaroni kwi-ngqolowa ye-vitreous. Kwaye kwiimveliso zeQela B zivela kumgubo ogqityiweyo wokubhaka, ongezantsi, kodwa awufanelekanga ukwenza ipasta. E-Italy, kwilizwe labo, ngokuqhelekileyo akuvunyelwe ukusebenzisa umgubo onjalo ukukhutshwa kwalo mveliso. Ngamaqela, yonke into ilula. Eyokuqala yimveliso evela kumgubo ophezulu, ukuya kweyesibini - ukusuka komgubo wokuqala.
Ngokubhekisele kwi-paste yeeqanda, amaTaliyane ayibheka njengento ehlukeneyo. Mhlawumbi oku kuchanileyo. Inhlama yongezwa ngopopi weqanda, okwenza kube lula ukunambitha. Yaye i-noodle esheshayo, engabonakaliyo okanye kwitheknoloji yokuvelisa, ayifani ne-pasta eqhelekileyo. Okukuphela kwezinto eziphambili kukuba ngaphambi kokupakisha iqhutywe ngophethi. Ndiyabulela kule nto, ipheka ngaphantsi kwemizuzu embalwa nje. E-Itali, kukho iintlobo ezingaphezu kwama-300 zeepasta. Kwizitolo zethu, "iintlobo zeentlobo ezahlukeneyo" zizithoba kakhulu - ezimbalwa. Ehlabathini lonke, i-spaghetti (spago) yinto ethandwa kakhulu. Yaye kuthi kuthi i-macaroni ehamba phambili kunye neempondo.
Macaroni - loo mveliso ilula. Ngoko ke, ukuba umlimi ufuna ukuthengisa impahla yakhe ngentengo ephakamileyo kunomyinge, ufuna enye into emangalise umboleki. Uhlobo lwe-pasta enemibala, ekulungiswe kunye nokudibanisa i-puree yemifuno yemvelo. I-pasta ebomvu - ngeenqholi, ezimfusa - kunye neebhunge, eluhlaza-kunye nesipinashi. Zibukeka ngokungavamile kwiplate, njengabantwana kwaye zilungele ukufumana isaladi. Unyaka ngonyaka wokungeniswa kulo marike uya kuba ngaphantsi. Kodwa i-pasta yangempela yaseNtaliyane isenokuthengwa kwiivenkile zethu. Nangona amaxabiso amabini okanye ngaphezulu axabisa ngaphezu kwexabiso eliqhelekileyo lepasta yasekhaya.
Kucingwa ukuba i-macaroni ityebile. Oku akunjalo ngokupheleleyo. Ngokomzekelo, umlingisi odumile ongumNtaliyane uSophia Loren wamnqulela i-pasta yonke impilo yakhe kwaye wayevame ukupheka ngeendidi ezahlukeneyo. Kwaye u-Anna Magnani owayengumdlali onqabileyo, wayedla ukutya kwepaghetti kwaye ngexesha elinye lahlala elincinane. IziNtlanzi zaseNtaliyane zithi ukugcina isimo esifanelekileyo, sidle iplate ye-"engenanto" yokunamathisela kabini ngeveki. Ngokubanzi, i-pasta ayingozi kubafundi, ukuba ayenziwa kakubi. Ngama-gramu ayi-100 yemveliso eyomileyo iqulethe i-kilocalories ezingama-350, kunye nesitya esilungisiwe-kathathu ngaphantsi. Vumelana, kungekhona kakhulu. Into ephambili ayikuhlanganisi i-pasta namafutha. Ngaphandle kokulimala kwinqeni, imifuno ingafakwa kwi-pasta ngaphandle kweoli, kunye ne-sauce elula, umzekelo we-soy. Yaye nantsi uhlobo oluqhelekileyo lwesiRussia - ama-noodle aneeshizi kunye nebhotela-indlela echanekileyo yokunyusa ubunzima.
Ukhula oluvela kwingqolowa ye-durum, ephuma kuyo i-pasta ye-classic, isityebi kwiivithamini zeqela I-pasta ininzi kakhulu i-vitamin F. I-quality pasta iqukethe i-fiber, eyenza ukuvakalelwa kwexesha elide kwaye isuse i-toxins emzimbeni.
AmaTaliyane atya njani iPasta
• amaTaliyane abalipheki i-pasta njengaye - kuze kube yindawo echanekileyo ebizwa ngokuba yi-dente. Landela umzekelo wabo - mhlawumbi uya kuthanda.
• E-Italy, bahlala bexuba i-pasta neentlanzi. Nangona ngandlela-thile sicinga ukuba le mveliso ayihambelani kakhulu.
• Ixesha langoku kwifashishini liquka i-salads based based. Bongeza i-pepper e-sweet, i-broccoli, ama-mushroom, ama-olives, i-garlic, i-cherry utamatisi kunye nexesha leoli yeoli, iviniga ye-balsamic kunye namayeza ase-Italy.
• I-Macaroni inokulala kwindawo yokubeka ngaphandle kokunciphisa ingcamango iminyaka. Nangona kunjalo, ngokugcina ixesha elide, balahlekelwa iipropati ezifanelekileyo.
Abafazi abathandekayo bebukele ubungakanani babo. Phendula lo mbuzo: "Kutheni amaTaliyane angama-pasta, kodwa asikwazi?". Khumbula, i-pasta esemgangathweni ayigcwele. Ukongezelela, ziyanelisa kwaye ziqukethe izinto ezincedo. Bon appetit!
Ngaba ilusi elitsha liluncedo?
Ukugcoba: ukutya okunempilo
I-kefir ephilileyo esuka kumakhowa aseTibetan
Izinzuzo kunye nokulimaza ukuloba kunye neentlanzi zaselwandle
Unokunyamekela njani igumbi le-pygmy irharnate
Imfundo yesondo yomntwana
Umyeni ka-Elton John wanika umqeqeshi wakhe indlu yokuhlala
Indlela yokuchitha intsapho yeKrisimesi
Izikhwama zokuphatha izinja
I-honeysuckle esebenzayo ebusika-i-step-by-step zokupheka kunye nezithombe kunye namavidiyo
Ikhodi kwi-tomato sauce
Yeka indlela ekhethileyo yokupheka i-russula: zokupheka izitya ezingcono
Umfana waphosa, kodwa akanalo ntombazana: isizathu